यस्ता व्यक्तिले खानुहोस नरिवलको पानी .... के छ नरिवलको पानीको फाईदा? -
यस्ता व्यक्तिले खानुहोस नरिवलको पानी …. के छ नरिवलको पानीको फाईदा?
मान्छेले नरिवल त खान्छ तर नरिवलको पानी खासै खाने गरेको पाईँदैन् । नरीवलको पानी खाँदा हुने फाईदाबारे थाहा नभएर पनि यसो हुन सक्छ ।
नरिवल पानी जैबिक रुपमा स्वस्थ र सफा पेय पर्दाथ हो । यसमा ९४ प्रतिशत पानी हुन्छ भने क्यालोरीको मात्रा न्यून हुन्छ । नरिवल पानीमा भिटामिन बी र एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । पोटासियम र म्याग्नेसियम समेत यसमा हुन्छ । नरिवल पानी खाने हो भने साच्चिकै हाम्रो स्वाथ्यलाई आश्चर्यजनक फाईदा दिन्छ । नरिवल पानीले ह्दय घातको खतरलाई न्यून गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार अनियमित एक गिलास नरिवल पानी खाँदा मुटु रोग र ह्दयघातको खतरा न्यून हुन्छ । हामीले यसका केही महत्वपूर्ण फाईदाहरु तल उल्लेख गरेका छौँ ।
१. किड्नी स्टोनको खतरा घटाउछ
तपाईलाई किड्नीको स्टोन छ भने पनि पिसाबको प्रबाहलाई तीब्र पारेर यस रोगबाट मुक्ति मिल्न समेत सहयोग मिल्छ । नियमित नरिवल पानी पिउने गरेमा किड्नी स्टोनको खतराबाट बचाउँछ । त्यसमा हुने पोटासियम र म्याग्नेसियमले पिसाबको प्रबाहलाई बृद्धि गरी शरिरमा अत्यधिक पानी हुने समस्याबाट जोगाउँछ ।
२. पखलाको उपचार
नरिवल पानी पखाला लागेको निको पार्ने अचूक औषधी हो । शरिरभित्र भएका अनवाश्यक हानीकारक विषहरुलाई यसले बाहिर फालिदिन्छ । शरिरबाट खेरा गइरहेको पानीको मात्रलाई पूर्ती गर्नुका साथै इलेक्ट्रोलाईट र खनिज पनि प्रदान गर्छ ।
४. गर्मीमा शरिरलाई शितलता दिन्छ
गर्मी भइरहेको बेला शरिरलाई आनन्द दिनका लागि नरिवल पानी भन्दा अर्को कुनै हुन सकदैन् ।
५. व्यायायमपछि पिउदा फूर्तीलो र तन्द्रुस्ती बढाउँछ
व्यायामपछि अर्थात कडा शारीरिक काम गरेपछि डिहाइडेडको सम्भावनाबाट बचाउन नरिवल पानी महत्वपूर्ण पेय पर्दाथ हुन सक्छ ।
६. छालामा चमकपन र निखारता ल्याउँछ
भद्दा छालालाई ताजा नरिवल पानीको सेवनले नरम बनाउनुको साथै धपक्क चमक ल्याइदिन्छ । त्यस्तै हात र अनुहारमा दिनको दुई पटक यसको प्रयोग गर्दा अत्यधिक फाइदा भएको पुष्टि भइसकेको छ । नरिवल पानीमा पाईने काइटोकिनिस तत्वले शरिरको कोषलाई सशक्त बनाउनुका साथै चाउरी र बृद्ध हुनबाट बचाउँछ ।
७. गर्भवतीसँग सम्बन्धित समस्याबाट मुक्ति दिलाउछ
नरिवल पानी स्वस्थ र संक्रमणरहित हुन्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा यसलाई पिउदा सुरक्षित मानिन्छ । यसको सेवनले गर्भाधारणका क्रममा हुने वाकवाकी, अम्लियपन, र मुटु तथा घाँटी पोल्ने समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्छ । गर्भवती महिलााले नियमित नरिवल र यसको पानी खाँदा पेटभित्रको शिशु निकै स्वस्थ हुने बताईन्छ ।
Previous बच्चाहरुको नाम राख्ने बेला भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ८ गल्ती
Next के तपाइँसँग पुरानो वा काम नलाग्ने लुगाहरु छन् ? त्यसोभए यसो गर्नुस् (सार्वजनिक अपिल)